Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay in bisha Febraayo la bilaabayo dhismaha isbitaalka ugu weyn Puntland. | Puntland Ministry of Health
Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa soo dhoweysey Injineero ka socda dalka Jarmalka oo qiimayn ku samaynaya goobta laga dhisayo isbitaal weyn oo dowladda Jarmaalku ka hirgelinayso Puntland.
Dhisidda isbitaalka ayaa qayn ka ah mashaariic dhinaca caafimaadka ah oo ay dolwadda Jarmalku ku taageerayso Dowladda Puntland, kuwaas oo socondoona saddexda sano ee soo socda ayna ku baxayso dhaqaale gaaraya $ 31.3 Milyan oo doolar.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr Cabdirisaaq Xirsi Xasan iyo duqa magaalada Garoowe Xasan Goodir ayaa injineerada geeyey isbitaalka guud ee Garoowe iyo goobaha kale ee dowladda Jarmalku mashaariicda ka fulinayso.
Agaasimahu wuxuu warbaahinta u sheegay in bisha Febraayo ee soo socota uu Madaxweynaha Puntland Pro. Cabdiweli Cali Gaas uu si rasmi ah u dhagax dhigidoono isbitaalkan oo ahaan doona isbitaalka ugu weyn Puntland isla markaana si casriyaysan loo qalabayndoono.